★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလားတွေ ခွေးလို ၀က်လို သေကြပြန်ပြီ : Many killed in Pakistan blasts
ကုလားတွေ ခွေးလို ၀က်လို သေကြပြန်ပြီ : Many killed in Pakistan blasts
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:16 AM
သီပေါမင်း၇ဲ. အဖေက မင်းတုန်းမင်းဖြစ်တယ်
သီပေါမင်း မိန်းမ ( စုဖု၇ားလတ်) ၇ဲ.အဖေက မင်းတုန်းဖြစ်တယ်
နင်တို.ဗမာတွေကဘယ်လိုတွေတုန်းဟ ကိုယ်.နှမကို ပြန် မုဒိန်းကျင်.လို.၇လား
စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ကျွန်ကုလား pyaypa
သမိုင်းဆိုတာ ပြင်လို့မရဘူးကွ။ ၀ါးဟားဟား… ကျွန်ကုလား. .. မင်းတို့တွေ မွတ်ဆလင် ဖြစ်လာတဲ့ သမိုင်းကို မသိဟန်ဆောင်ပြီး ဖင်ပိတ်ငြင်းတာလား? သနားလိုက်တာကွာ။ မင်းတို့ကို အာရပ်တွေက စစ်တိုက်တယ်။ စစ်တိုက်လို့ စစ်ရှုံးတော့ မင်းတို့ အဖွားရဲ့ စအိုပေါက်မဲမဲတူးတူးကြီးကို တဗုံန်းဗုံးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ပြီးမှ မွတ်ဆလင်လုပ်ခဲ့တာလေ။ အဲဒါကို မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဖင်ပိတ်ငြင်းတော့.. မင်းတို့ အဖွားရဲ့ စအိုအပေါက်ကြီးက အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာ မိုလို့လား? ဟိဟိ။ အာရပ်တွေ မုဒိမ်းကျင့်လို့ စအိုမှာ အနာဖြစ်သွားတာကို ဆေးပဲမှန်မှန်ထည့်ပေးပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allah ကို ချီးတွင်းထဲ နှစ်ပြီးသတ်ဖို့ အကြံပြုတဲ့
သမိုင်းဆိုတာပြင်လို.မ၇ပါဘူး မင်းတို.ဗမာတွေမောင်နှမချင်းညားကြတာ စာတတ်တဲ.လူတိုင်းသိတယ် အာ၇ပ်ကြီး၇ဲ.ဖင်ချခံလိုက်၇တာ မင်းအဖွားလေ ဖင်တင်အားမ၇လိူ. ပါးစပ်နဲ.တောင် အား၇ပါး၇စုပ်လိုက်သေးတယ်လေ ၇ာဇဝင်မှာလှန်ကြည်.ပါအုံး ဟားဟား အော် နင်ကနင်.အဖွားကိုဆေးမှန်မှန် ထည်.ပေးတယ်ဟုတ်လား ပါးစပ်ကိုပါ ဆေးထည်.ပေးလိုက်ကြားလား
စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ ကျက်သရေမဲ့တဲ့ ကျွန်ကုလားရဲ့ အရှက်မရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဝါဒမှာ နှမ ၀မ်းကွဲကို လက်ထပ်တာ အားပေးတယ်။ မွတ်ဆလင်ဝါဒမှာ သမီးအရင်းကို တက်ချခွင့်ပေးတယ်။ မိုဟာမက်ဟာ သူ့ချွေးမကို ကြာကူလီခိုခဲ့တယ်. .. အဲဒါတွေကို မသိဟန်ဆောင်ပြီး မြန်မာကို စောက်တင်းပြောရဲတာလေးစာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ စအိုပေါက်ကြီး မုဒိမ်းကျင့်ပြီး မွတ်ဆလင်လုပ်ခံရတာကို ဂုဏ်ယူခဲ့တာပေါ့ကွာ… ၀ါးဟားဟား။ ဟဲဟဲ ဒါနဲ့ . . . မွတ်ဆလင်တွေ ကိုယ့်အမေကိုယ် မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ သတင်း.. မွတ်ဆလင်တွေ ကိုယ့်ညီမကို တက်ချတဲ့ သတင်း။ မွတ်ဆလင်တွေ ကိုယ့်သမီးကို စအိုပေါက်ကို ချတဲ့ သတင်းတွေကို သိချင်ရင် ပြောနော်. . . သတင်းတွေ သိမ်းထားတာ ရှိတယ်။ ရှေးတုံးက ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီနေ့ ဒီကာလကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာကို အထောက်အထားနဲ့ ပြပေးမယ်။ သိချင်လား? ဖြေစမ်း…
p.s. မွတ်ဆလင်တွေ သူတို့အမေကို မုဒိမ်းတက်ကျင့်တဲ့ သတင်းကို အထောက်အထားအနေနဲ့သာ ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်သည် မွတ်ဆလင်ကနေ ထွက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတော့ သတိထားပါ။ ဟိဟိ
မူဆလင်တွေ ဘု၇ား၇ှိခိုးတဲ့အသံ .. ၀ူးးးးးဝါးးဝူးးဝါးးးး ၀က်စွတ်... ၀က်စွတ် .. ၇ှိခိုးမယ် .. လေးဖက်ကုံးပြီး ပြောပုံက မှားတာ၇ှိ၇င် ၀န်ချတောင်းပန်ပါတယ် မကျေနပ်၇င်ဖင်ချပါတဲ့ ... ဟိဟိ
Moe Zat said...
Nyein Chan said...
yae tot lee phyt loet lar?